मिरिकमा कति करोडको विकास भइरहेछ, तपाईँलाई थाहा छ? - खबरम्यागजिन
Homeखबरमिरिकमिरिकमा कति करोडको विकास भइरहेछ, तपाईँलाई थाहा छ?
June 29, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मिरिक, मुख्य समाचार 0
मिरिक, 29 जून।
करोडौंमा खेल्दै मिरिक
मिरिक क्षेत्रमा हाल 378 करोडभन्दा अधिक राशिको विकास कार्य भइरहेको छ। जसमध्ये आधासरो काम पूरा भइसकेको छ भने आधा काम हुन बाँकी छ। जसमा सडकमा म्यास्टिक लगाउने, स्ट्रीट लाइट, पानी, मिरिक झीलको सुन्दरीकरण, सफाई आदि कामहरू सामेल छन्।
आज मिरिक नोटिफाइड इलाकामा भइरहेका विकासका कामहरूको सूचीनै सार्वजनिक गर्दै मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एवं तृणमूल कङ्ग्रेस नेता एलबी राईले मिरिकका जनताका सारा आवश्यकता पूरा भइरहेको जनाए।
‘जनताका आवश्यकताहरू पुरा भइरहेका छन्। सबै भइसक्न एकदेखि डेढ वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले कहाँ कहाँ के के भइहेको छ, त्यसको फेहरिस्त नै देखाए।
‘राङभाङबाट पानी ल्याउनको लागि राज्य सरकारबाट 127 करोड रूपियाँ अनुमोदन भइसकेको छ। गाउँ-घरमा पानी वितरण गर्नको लागि 56 करोड पनि आइसकेको छ। 10 करोड रूपियाँको लागतमा स्ट्रीट लाइटको काम 70 प्रतिशत पूर्ण भइसकेको छ,’ राईले हर्षित मुद्रामा सुनाए, ‘मिरिकका सडकहरूमा लगभग 29 करोड रूपियाँको म्यास्टिक लगाउने काम अघिबाटै भइसकेको छ। अब मिरिक झीललाई सुन्दरीकरण गर्ने साथै यसको सफाईको लागि 156 करोडको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार पारिएको छ।’
मिरिक अहिले पैसैपैसामा रहेको र विकासले सिँडी उक्लिरहेको जनाउँदै गाडीहरूको लागि स्ट्याण्ड, अस्पतालको पनि निर्माण भइरहेको जनाए।
करोडौं रुपियाँ, विकास र अन्त्यमा पार्टी विस्तार
विकासको कुरा सुनाउँदासुनाउँदै उनले पार्टी विस्तारको सन्दर्भ झिक्न भुलेनन्। उनी साङ्गाठानिक सभा गर्न दार्जीलिङ आएका थिए। उनले पार्टी बिस्तारको लागि पार्टी कार्यकर्ताहरूसित बैठक पनि गरे।
‘तृणमूल कङ्ग्रेसको नारानै विकास अनि शान्ति हो र यसै दिशामा पार्टीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसैले मिरिक नगरपालिकाले मिरिकमा विकासका कामहरू गरिरहेको छ अनि यसमा राज्य सरकारले पनि पूर्ण सहयोग पुऱ्याइरहेको छ।’